आईपीएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्सले तेस्रो खेल खेल्दै, सन्दीप खेल्ने सम्भावना कति ?:: Naya Nepal
आईपीएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्सले तेस्रो खेल खेल्दै, सन्दीप खेल्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौ । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आज नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सले तेस्रो खेल खेल्दै छ।
आईपीएलको ११औँ खेलमा आज दिल्ली र सनराइजर्स हैदरावाद भिड्न लागेका हुन्। खेल, साँझ पौने ८ बजे आवुधावीस्थित शेखजायद स्टेडियममा हुनेछ।
अपराजित दिल्ली सोही लयलाई निरन्तरता दिँदै शीर्ष स्थानमा रहन चाहन्छ। उच्च मनोबलमा मैदान उत्रिँदा दिल्ली तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने हैदरावाद पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ।
दिल्लीले पहिलो खेलमा किंग्स एलेभेन पञ्जावलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई ४४ रनले हराएको थियो।
दिल्ली पृथ्वी शाह, शिखर धवन, कागिसो रवाडा, सिमरन हेटमेयर जस्ता खेलाडीले बलियो छ।
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय डीनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा बल्खु काठमाडौले परीक्षा तालिका (रुटीन) प्रकाशन गरेको छ ।
भर्खरै प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ यस संकायले सञ्चालन गर्ने सेमेस्टर प्रणाली अन्र्तगत स्नातक र स्नातकोत्तर तह (नियमित र आंशिक) सत्रान्त परीक्षाहरु देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टर २०७७ साल मंसिर तेस्रो हप्ता
स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टर २०७७ साल मंसिर चौथो हप्ता
स्नातक तह आठौ सेमेस्टर २०७७ साल मंसिर तेस्रो हप्ता
स्नातक तह प्रथम र छैठौ सेमेस्टर २०७७ साल पौष पहिलो हप्ता
खुला तथा दुर सिकाई अन्र्तगत दुई सेमेस्टरको स्नातकोत्तर (विज्ञान र शिक्षा) २०७७ साल पौष दोस्रोे हप्ता
खुला तथा दुर सिकाई अन्र्तगत दुई सेमेस्टरको स्नातक (सामाजिक अध्ययन शिक्षा) २०७७ साल पौष दोस्रोे हप्ता
आफ्नै बाबुले ९ वर्षदेखि सम्बन्ध राखिरहे, आमालाई भन्दा पनि छोरीले न्याय पाइनन् !
काठमाडौ । आफ्नै छो’रीको ब$ला#त्कार गर्ने बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । चौध वर्षीया छोरीलाई पटक–पटक ब$ला$त्कार गरेको आरोपमा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ३५ वर्षीय बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले बताए ।
पीडितका आमा र भाइ घर नभएको बेलामा असोज ८ गते पछिल्लो पटक ब$ला#त्का$र गरेको पीडितले प्रहरीलाई बताएकी छिन् । प्रहरीको सहयोगमा जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित आवास गृहमा राखिएकी बालिकाको स्वास्थ्यपरीक्षण गरिएको छ ।
घटना पटक–पटक भएको र आफ्नो आमाले घटना थाहा पाउँदासमेत आफूले न्याय नपाएपछि घर छाडेर भागेको बालिकाले बताएकी छिन् । आरोपित बाबुले आफूलाई पाँच वर्षको उमेरदेखि नै ब$ला$त्का$र गर्दै आएकाले छिमेकीको घरमा काम गर्ने एक जनासँग भागेर काठमाडौँ जान लाग्दा पीडित बालिकाको उद्वार गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । शरिरमा कोठीको आफ्नै महत्व रहेको छ । यसले कुन स्थानमा रहेको कोठी कत्ति फलदायी हुने त्यसको संकेत गर्ने ज्योतिषहरु बताउँछन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी स्थानमा कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ ।
नाकमा कोठी भएका मानिसहरु आफ्नो करियरमा निकै प्रगति गर्ने गर्दछन् । प्रगति ढिला भएपनि उनीहरु आफ्नो करियरमा एक राम्रो गन्तव्यमा पुग्छन् ।
चिउँडोमा कोठी भएका मानिसहरुको बिग्रेको काम पनि बन्ने गर्दछ ।
ज्योतिष अनुसार जो मानिसको हत्केलामा कोठी हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति भाग्यमानी हुन्छन् विशेषगरी कोठी मुट्ठीभित्र पर्छ भने ।
जो व्यक्तिको पिठ्युँमा कोठी हुन्छ उनका सन्तानले निकै